Wasiirka Warfaafinta Puntland: ma aqoonsani wax wariye ah. (Dhegayso). – Radio Daljir
Wasiirka Warfaafinta Puntland: ma aqoonsani wax wariye ah. (Dhegayso).
Diseembar 5, 2012 6:33 b 0
Garoowe, Dec 5, Wasiirka Wasaarada Warfaafinta isgaarsiinta, hidaha iyo dhaqanka ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaa sheegay inuusan aqoon sanayn wax wariye ah oo ka shaqeeya Deegaanada Puntland sida uu hadalka u dhigay.
Isagoo u waramay Barnaamijka Xulashada ee Radio Daljir ayuu sheegay in Saxaada Puntland ka jirta iyo Wariyaasha midna uusan u hayn wax aqoonsi ah, hadalku ayuu sheegay mar su’aal laga weydiiyey cabasho Suxufiyiinta Puntland ka muujiyeen xeer la sheegay in lagu dhaqayo Saxaafadda oo ay soo saartay Wasaaradda Warfaafintu.
Wasiirka ayaa sheegay in aysan Wasaarada Warfaafintu aysan Suxufiyiinta ?kala tashan doonin xeerka lagu hagayo Warbaahinta oo la horgeyn doono Barlamanka.
Hadalka Wasiirka ayaa jawaab u ah Cabasho ay saxaafada Puntland ka muujisay Xeerka Warbaahinta oo ?Wasaaraddu sheegtay inay u gudbinayaan Baarlamaanka iyadoo aan lagala tashan bahda Saxaafadda ee uu khuseeyo.
Arintani ayaa Cirka kusii laalaysa Khilaafka ka dhex curtay Warbaahinta iyo Wasaaradda oo salka ku haya sharciga lagu dhaqayo Warbaahinta Puntland, Waxaana khilaafkani yimid Xili Xukuumadda Puntland wado qorshaha taaba galinta nidaamka Dimuqraadiyadda Puntland.
Dawladaha Masar iyo Itoobiya oo ku muransan biyaha Niil barnaamij kusaabsan dhegayso.
Muqidhso: Hoobiye xalay lagu garaacay degmada Boondheee (Dhegayso)